अचानक ! घरको छत ख’स्दा, वंशनै नरहने गरी परिवारै स’खाप ! – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /News/अचानक ! घरको छत ख’स्दा, वंशनै नरहने गरी परिवारै स’खाप !
काठमाडौँ । कोठामा सुतिरहेका बेला अ’चानक घरको छत ख’स्दा परिवारका पूरै सदस्यको ज्या’न गएको छ। गहिरो निद्रामा रहेका बेला बिहान ५ बजेतिर अ’चानक घरको छत खस्दा एकै परिवारका ४ सदस्यको मृ’त्यु भएको हो। घ’टना भारतको रतलामास्थित औद्योगिक क्षेत्रको हो। बिहीबार बिहान ५ बजे
अ’चानक घरको छत ख’स्यो । घरमा रहेका दुई बच्चा र पत्नीको घ’टना स्थलमै मृ’त्यु भयो भने पतिको अस्पताल लैजादै गर्दा बाटोमै ज्या’न गयो।भारतीय मिडियाका अनुसार उक्त घर एकै कोठाको थियो। मृ’तक मोहन कहारले पछिल्लो
चार महिनादेखि उक्त घर भाडामा लिएका थिए। मोहन साबुआ भन्ने स्थानका थिए। तर उनी चार महिलाअघि मात्रै परिवारसहित त्यहाँ बस्न आएका थिए। उक्त घर ४०-४५ वर्ष पुरानो भएको बताइएको छ।
त्यसैगारी कपाल लामो बनाउन जसलाई पनि मन पर्छ । हरेक युवतीहरु कपाल लामो बनाउने सौन्दर्य प्रशाधनको खोजीमा भौतारिइरहेका हुन्छन् । तर, घरैमा सर्वसुलभ प्याज कपालको सुन्दरताका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने कमैलाई थाहा होला ।
प्याज कपाल झर्ने र दुई मुखे कपालका लागि उपयोगी हुन्छ । प्याजमा रहेको सल्फरले कपालको जरालाई पोषण दिन्छ, जसले कपालको विकासका लागि मद्दत पुग्छ ।
आज काठमाडौंका यि -यि ठाउँमा बत्ती जाने